IBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke - iNdima kunye noBulungu
Apho uMongameli athola iingcebiso kwiiNkcazo zangaphandle nakwiNdlu
IBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke liqela elibalulekileyo labacebisi kumongameli waseUnited States kwimicimbi yokhuseleko lwangaphandle nolwasemakhaya. IBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke lenziwe ngamagosa angamaqela asekuhlaleni kunye neengqondi ezikhonza njengentliziyo yemigudu yokhuselo kunye nomgaqo-nkqubo wase-United States.
Ibhunga libika kumongameli kwaye kungekhona iCongress kwaye linamandla kangangokuthi linokumisela ukubulawa kweentshaba zaseUnited States, kubandakanywa nabahlala eMelika.
Umthetho odala iBhunga loKhuseleko likaZwelonke uchaze umsebenzi walo
"ukucebisa uMongameli malunga nokuhlanganiswa kwemigaqo-nkqubo yasekhaya, yangaphandle kunye nemikhosi enxulumene nokhuseleko lwesizwe ukwenzela ukuba iinkonzo zemikhosi kunye namanye amasebe kunye nee-arhente zikaRhulumente zisebenzisane ngokuthe ngempumelelo kwimicimbi ephathelele ukhuseleko lwesizwe. "U
Umsebenzi webhunga nawo
"ukuvavanya nokwenza iinjongo, izibophelelo kunye neengozi ze-United States ngokubhekiselele kummandla wethu wamandla omkhosi, onomdla wesizwe, ngenjongo yokwenza iingcebiso kuMongameli ngokuphathelele."
Amalungu eBhunga likaZwelonke loKhuseleko
Umthetho odala iBhunga loKhuseleko likaZwelonke ubizwa ngokuba nguMthetho weSizwe woKhuseleko. Isenzo sichaze ubulungu bebhunga kummiselo ukubandakanya:
Unobhala weSebe likaRhulumente
Unobhala we-Air Force
Usihlalo weBhodi yeZibonelelo zoKhuselo kaZwelonke
Umthetho ufuna abacebisi ababini kwiBhunga loKhuseleko likaZwelonke.
Usihlalo weeNtloko zeeNtloko zabasebenzi ukhonza njengomcebisi wempi ebhunga
Umlawuli weeNkonzo zeSizwe zobunhloli njengeluleki weengcebiso kumabhunga
UMongameli unengqiqo yokumema amanye amalungu abasebenzi bakhe, ulawulo kunye nekhabhinethi ukuba ijoyine iBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke. Kwixesha elidlulileyo, umongameli wongameli kunye nomcebisi oyintloko, unobhala weNondyebo, umncedisi kumongameli womgaqo-nkqubo wezoqoqosho kunye negqwetha eliqhelekileyo baye bamenywa ukuba baye kwiintlanganiso zeBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke.
Ukukwazi ukumenywa kwamalungu angaphandle komkhosi wezempi kunye nolwazi lwezentlalo ukudlala indima kwiBhunga loKhuseleko likaZwelonke kuye kwabangela ukuba kube neengxabano. Ngomnyaka we-2017, umzekelo, uMongameli uDonald Trump wasebenzisa umyalelo olawulayo ukugunyaza umphathi wakhe wezepolitiki, uSteve Bannon , ukuba akhonze kwikomiti yeenqununu zeSizwe soKhuseleko. Ukufuduka kwabanjwe abaninzi baseWashington ngokumangaliswa. "Indawo yokugqibela ofuna ukubeka umntu oxhalabileyo ngezopolitiko kwimeko apho bakhulume ngokhuseleko lwesizwe," owayenguNobhala wezoKhuseleko kunye noMlawuli weCIA uLeon E. Panetta utshele iThe New York Times . Emva koko iBhannon yasuswa kwibhunga.
Imbali yeBhunga loKhuseleko likaZwelonke
IBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke ladalwa ngokumiselwa koMthetho weSizwe woKhuseleko ka-1947, othi "ukulungiswa okupheleleyo kwazo zonke izixhobo zokhuseleko lwesizwe, ezoluntu kunye nempi, kubandakanywa nemizamo yengqondo," ngokutsho kweCandelo loPhando lweeNgqungquthela. Umthetho wasayinwa nguMongameli Harry S. Truman ngoJulayi 26, 1947.
Inkqubo yeSizwe yoKhuseleko yenziwe kwixesha leMvazwe yeMfazwe yesiBini, ngokuyinxalenye, ukuqinisekisa ukuba isizwe "siseko soshishino" siya kukwazi ukuxhasa izicwangciso zezokhuseleko zelizwe kunye nokubeka umgaqo-nkqubo, ngokwe-Congressional Research Service.
Wabhala uchwepheshe wezokukhusela welizwe uRichard A. Best Jr .:
"Ekuqaleni kwee-1940, ubunzima beemfazwe zehlabathi kunye nesidingo sokusebenzisana kunye nabadibanisene bekhokelela kwiinkqubo ezongezelelweyo zokwenza izigqibo zokhuseleko ukuqinisekisa ukuba imizamo yeSebe likaRhulumente, iMfazwe kunye neNavy lijoliswe kwiinjongo ezifanayo. Kwakukho imfuno ebonakalayo yenkampani yokuxhasa uMongameli ekujongeni ukuphindaphinda kwezinto, impi kunye nezopolitiko, eza kufuneka zijongane ngexesha lexesha lemfazwe nakwiinyanga zakuqala emva kwemfa, xa kwakufuneka kwenziwe izigqibo ezibalulekileyo malunga nekamva EJamani naseJapan kunye namanye amazwe amaninzi. "
Umhlangano wokuqala weBhunga loKhuseleko kaZwelonke ube ngomhla we-Septemba 26, 1947.
Imfihlo yokubulala iPhaneli kwiBhunga loKhuseleko likaZwelonke
IBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke liqulethe elinye iqela eliyimfihlo elichaza iintshaba zaseburhulumenteni kunye namaqela asebenzayo aseMelika ukuba abulawe nguRhulumente wase-US. Kukho oko kuthiwa "ukubulala iipaneli" kuye kwaba khona ukususela kubangqina bokuhlaselwa kwamaphekula ngoSeptemba 11, 2001, nangona kungekho maxwebhu enkqutyana ngaphandle kweengxelo zeendaba ezisekelwe kumagosa karhulumente angabhalwanga.
Ngokutsho kweengxelo ezipapashwe, i-subgroup igcina "uluhlu lokubulala" oluhlaziywa ngumongameli okanye i-vice-president nganye ngeveki.
Iingxelo zeNyunyana yamaLungelo eNkululeko yaseMerika:
"Kukho inkcazelo encinci ekhoyo ebantwini malunga nokujoliswa kwe-US kubantu abaninzi kude nasiphi na imfazwe, ngoko asiyazi ukuba nini, apho kunye nxamnye nobani obujoliswe ekubulaleni kungagunyaziswa. bulala uludwe, "ngamanye amaxesha ngexesha, emva kwenkqubo yangaphakathi eyimfihlo. Enyanisweni, izakhamuzi zase-US kunye nabanye bafaka 'ukubulala izintlu' ngesiseko sokumfihlo, ngokusekelwe kubungqina obuyimfihlo, ukuba umntu uhlangana nemfihlelo inkcazo yengozi. "
Nangona i-Intelligence Intelligence Agency kunye nePentagon zigcina uluhlu lweentshagri ezivunyelwe ukuba zithathwe okanye zitshatyalaliswe, iBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke lijongene nokuvuma ukubonakala kwazo kwibala lokubulala.
Ngaphantsi koMongameli uBarack Obama, ukuzimisela ukuba ngubani obekwe kwicala lokubulala lalibizwa ngokuba yi "matrix disposition". Kwaye igunya lokuthatha isigqibo lisuswe kwiBhunga loKhuseleko likaZwelonke kwaye lafakwa ezandleni zegosa eliphambili lokulwa nobugqirha .
Ingxelo epheleleyo malunga ne-matrix evela eWashington Post ngo-2012 ifunyenwe:
Ukubulawa okujoliswe ngoku kulungele ukuba ulawulo luka-Obama luchithe unyaka owedlulileyo luququzelele kwaye lulungelelanise iinkqubo ezizinzileyo.Ulo nyaka, iNdlu yeNdlu yaseNtshonalanga yathatha inkqubo apho iPentagon kunye neBhunga loKhuseleko leSizwe lijongene nokuhlola Amagama ayongezwa kwiintlobo zeenjongo ze-US. Ngoku i-system isebenza njenge-funnel, ngokuqala ngegalelo ukusuka kwisiqingatha se-arhente ezili-12 kunye nokunciphisa ngokubaluleka kokuhlaziywa kwaze kwagqitywa ukuhlaziywa okucetywayo kumcebisi [we-White House Counterrorism adviser John O.] ideskiti yaseBrennan, kwaye kamva wanikelwa kumongameli. "
IBhunga lezoKhuseleko likaZwelonke
Umbutho kunye nokusebenza kweBhunga likaKhuseleko kaZwelonke lihlaselwe rhoqo emva kokuba iqela elicebisa liqale ukudibana.
Ukungabikho komcebisi okhuselekileyo wezekharityhulam kazwelonke kunye nokubandakanyeka kwabasebenzi bebhunga kwimisebenzi yokufihlakeleyo kuye kwaba yimbangela ebalulekileyo yokukhathazeka, ngokugqithiseleyo phantsi koMongameli uRonald Reagan ngesikhalazo se- Iran-Contra ; I-United States yayivakalisa ukuchasana nobutshaba ngexesha iBhunga loKhuseleko likaZwelonke, phantsi kolawulo lukaLt Col Col Oliver North, ukulawula inkqubo yokubonelela izixhobo kwi-terrorist state.
UMongameli weBhunga likaKhuseleko likaZwelonke uBarack Obama, okhokelwa nguMcebisi weSizwe woKhuseleko uSus Rice, wenziwa ngumlilo ngenxa yokusingathwa kwayo kwemfazwe yombutho eSiriya, uMongameli uBashar al-Assad, ukusasazeka kwe- ISIS kunye nokungaphumeleli ukususa izixhobo zamakhemikhali abazisebenzisa ngokuchasene nabantu .
IBhunga likaKhuseleko likaZwelonke likaMongameli uGeorge W. Bush ligxeke ngokucwangcisa ukuhlasela i-Iraq kunye nokudiliza uSaddam Hussein kungekudala emva kokuvulwa ngo-2001. Unobhala ka-Bush kaNondyebo, uPaul O'Neill, owayekhonza kwibhunga, wacatshulwe esithi emva kokushiya iofisi : "Ukususela ekuqaleni, sakha i-case against Hussein kwaye sijonga indlela esinokumthabatha ngayo kwaye sitshintshe iIraq kwilizwe elitsha.Uye, xa senza oko, kuya kulungisa yonke into. Yiyo leyo yayingumxholo walo - umongameli uthi, 'Mhle, hambani ndifumene indlela yokwenza oku.' "
Ngubani oLawula iBhunga leSizwe loKhuseleko
UMongameli we-United States nguye usihlalo osemthethweni weBhunga loKhuseleko likaZwelonke. Xa umongameli engekho, umongameli wongameli usekela ibhunga. Umcebisi welizwe lokhuseleko unamanye amagunya okulawula, ngokunjalo.
Iikomitana eziphantsi kweBhunga loKhuseleko likaZwelonke
Kukho amanqwanqwa amaninzi eBhunga loKhuseleko likaZwelonke elijongene nokujongana nemiba ethile kwiinkqubo zokhuseleko lwesizwe. Ziquka:
IKomiti yeeNqununu: Le komiti yenziwe ngabalobi bamasebe kaRhulumente kunye noKhuseleko, umlawuli we-Intelligence Central, usihlalo weeNtloko zeeNtloko zabasebenzi, intloko yabasebenzi kumongameli kunye nomcebisi wezekhuseleko kazwelonke. Le komiti yenziwa phantsi koMongameli uGeorge HW Bush kwaye yenzelwe ukuvumela umongameli kunye nomongameli wongameli ukuba bahlale bekhululekile kwiintetho ezincinci zeengxoxo. IKomiti yeeNqununu, ngoko, ayibandakanyi umongameli okanye umongameli wongameli; Kunoko, iveza umsebenzi wayo kwiBhunga loKhuseleko leSizwe elipheleleyo ukuphunyezwa. "Ukuba le nkqubo isebenza njengenjongo, umongameli akanakudlulisa ixesha kwiinkcazo zomgaqo-nkqubo ongafanelanga kwaye angagxininisa kwiingxaki eziphezulu nakwiimicimbi apho amasebe kunye nee-arhente abakwazi ukufikelela kwisivumelwano," kuchaza iYunivesithi yezoKhuseleko kaZwelonke. ISebe lezoKhuseleko laseMerika.
IKomiti yeeNtloko: Le komiti yenziwe yisekela likazwelonke lomcebisi ngezekhuseleko kunye namagosa asezantsi. Phakathi kweembopheleleko zalo eziphambili kukuhlangana rhoqo ngexesha leengxaki zokuqokelela kunye nokufingqa ulwazi malunga nomongameli, umongameli kunye namalungu eBhunga loKhuseleko loZwelonke. Ngaphandle koko, livavanya isiphakamiso somgaqo webhunga elipheleleyo.
Iikomiti zeeNkqubo zoQoqosho:. Ezi komiti zenziwe ngonobhala beSebe loncedo. Inxaxheba yalo, ngokwememorandam kamongameli, "ukunika uhlalutyo lomgaqo-nkqubo ukuba luqwalaselwe ngamakomiti aphezulu kwenkqubo yokhuseleko lwesizwe kwaye iqinisekise iimpendulo ezifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kumongameli."
Iimpazamo zokuPhepheka ngexesha lokufunda iSpanish
Imbali Yemva Yomthetho yeSigwebo Sokufa eMelika
Iingoma zeBeatles: "I-Ballad kaYohn noYako"
Uphi Uvavanyo Lwembumbulu?